Kani waa HomeKit iyo barnaamijka Guriga ee iOS 13 | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Qalabka IPhone, HomeKit, macruufka 13
IOS 13 waxay la timid astaamo badan oo cusub, oo ay ku jiraan iyo sidoo kale qabsashada mid ka mid ah meelaha ugu caansan, isbeddelada lagu sameeyay HomeKit. Isbedelada bilicsanaanta leh naqshad cusub oo qaybo ka mid ah arjiga Guriga ah, qalabyada la isku geeyay, helitaanka tooska ah ee hawlo badan, iyo fursado cusub oo ay ka mid yihiin suurtagalnimada (ugu dambayntii) in lagu isticmaali karo HomePod iyo Apple TV-ga gudaha otomaatiga iyo bay'adaha.
Waxaan ku tuseynaa dhammaan isbeddeladan Beta-ga ugu horreeya ee iOS 13 fiidiyow oo soo koobaya wararka ugu muhiimsan. Barmaamijka otomaatiga guriga ee Apple wuxuu qaadaa dhowr talaabo oo horay loogu casriyeynayo naqshadeeda iyo howlo cusub, kuwa badan oo aan sugeynay. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato isbeddelada? Hagaag, fiidiyowgaan iyo maqaalkan waxaad ku leedahay kuwa ugu muhiimsan.
2 Habeyn Cusub
3 HomePod iyo Apple TV ee iswada iyo bay'ada
4 Riwaayado kale
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in shaashadda ugu weyn ee dalabku ay isku mid yihiin macruufka 13 iyo 12ka macruufka XNUMX, isla marka aad bilowdo isticmaalkeeda, waxaad dareemaysaa isbeddellada ugu horreeya ee naqshadeynta iyo shaqeynta. Qalabyadaas oo dhowr howlood horey u lahaa ayaa si gooni ah loogu daray, markaa haddii aad leedahay heerkul, huurka iyo dareeraha tayada hawada, mid kasta oo ka mid ah shaqooyinkani waxay u muuqan doonaan sidii inay yihiin qalab gooni ah. Hadda dhammaantood waxaa lagu soo daray mid muujinaya dhammaan macluumaadka. Tani waa kiiska tusaale ahaan dareemayaasha deegaanka, xargaha korantada, kontaroolada qaboojiyaha, iwm. Naqshaddani waxay lahayd dhibaatooyin qaar oo lagu hagaajin doono cusbooneysiinta mustaqbalka, sida in aadan dooran karin waxa ka muuqda shaashadda weyn.
Waxay sidoo kale si weyn u hagaajineysaa xakameynta nalalka casriga ah. Wixii markii hore kaliya na tusayay beddelka oo ay ahayd inaan ku dhex marno menus kala duwan si aan u awoodno in aan jaangooyo midabka, hadda wax walba waxay ku yaalliin shaashad isku mid ah, qaabeynta midabada la jecel yahay ee aan dooneyno inaan ku isticmaalno laydhadhkaas ayaa sidoo kale aad uga fudud. Waxaan sidoo kale leenahay astaamo cusub si loo garto qalabka iyo shaqooyinka, iyo buundooyinka aan ku darnay, ee dib loogu celinayo gudaha Guryaha, mar dambe kama muuqan doonaan shaashadda weyn.
Codsiga Guriga dhexdiisa waxaan sidoo kale ku aragnaa isbeddelada ciyaarta Settings. Kuwaas aan soo sheegnay ka sokow, waa halkaa buundooyinka aan ku darnay hadda ka muuqdaan, waxaan haynaa liis cusub oo aan ku xakameyno ogeysiisyada, oo aan hadda ku habeyn karno nooca qalabka. Waxaan heli doonnaa dhamaan qalabyada isla fasalka oo lagu soo ururin doono hal menu oo sidaas awgeed waxaan awoodi doonnaa inaan si dhakhso leh u qaabeyno ogeysiisyada.
HomePod iyo Apple TV ee iswada iyo bay'ada
Waxyaabo badan oo aan seegnay waxay ahayd suurtagalnimada in lagu daro HomePod (ama Apple TV) otomaatiyada. Hadda waxaan ugu dambeyntii dooran karnaa iyaga iyo sameysid otomaatik ka dhigaya HomePod inuu ciyaaro liiskaaga muusikada markii aad guriga gaarto jecel. Waxaan sidoo kale abuuri karnaa bey'ad leh agabkan, tanina waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku fulino dariiqooyinka dariiqa fudud qaab fudud, tusaale ahaan, wuxuu noo ogolaanayaa inaan damino alaarmiga na toosiya subax kasta si aan u bilowno inaan ku ciyaarno liiska muusikada ee HomePod.
Waqtigan xaadirka ah waxaan kaliya u isticmaali karnaa Apple Music sida il cod, ma ahan podcast, mana dooran karno codsiyada fiidiyowga ee TV-ga Apple, laakiin waa tallaabada ugu horreysa waxaana rajeyneynaa inta udhaxeysa hadda iyo sii deynta nooca ugu dambeeya, shaqooyin cusub ayaa lagu dari doonaa taas oo u oggolaaneysa HomePod iyo Apple TV in looga faa'iideysto gudaha guriga dhexdiisa iyo marinnada loo maro.
Fursadaha cusub ee kamaradaha amniga ee HomeKit-ku habboon sida kaydinta fiidiyowga ee iCloud, router cusub oo la jaan qaada HomeKit oo dammaanad qaadaya nabadgelyadaada iyo in cidina basaasayn karin waxa aad ku sameyso khadka tooska ah, iyo xulashooyinka kale ee aan arki doonno toddobaadyada soo socda sida cusub Betas ayaa muuqata iyo taas Soosaarayaasha ayaa cusbooneysiiya softiweerka si ay ula jaan qaadaan macruufkaan cusub ee 13.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Kani waa HomeKit iyo barnaamijka Guriga ee iOS 13
Kaameradda 'Logitech's Circle 2' waxay la jaanqaadi doontaa Muuqaalka 'HomeKit Secure Video'